HomeArimaha Qoyska4 Arin Oo Fudud Oo Bur-Burin Kara Noloshaada Guurka & Qoyskaaga Adiga Oo Aan Dareemayn
caashaqa Arimaha Qoyska, Wararka Maanta 1
Nolosha qoyska, xiriirka qoyska ee wanaagsan wuxuu ku saleysan yahay kalgacayl, jacayl & wax wada qabsi, laakiin waxaa jira qoysas qaarkood oo xiriirkoodu u muuqdo mid jilicsan oo aan wada jir lahayn oo aan is cafin lahayn iyo waliba wada xidhiidh la’aan iyo waliba karti ay labada qof ku wada xidhiidhidhaan.
waxaa jira xaalado carqaladeynaya sii wadida nolosha ee udhaxeysa labada qof ee isqaba, kuwaas oo si xun u saameeya isku xirnaanta qoyska oo dhan sidoo kale carqaladeysa xasilloonideeda.
Hadaba waxa aan halkan ku soo bandhigi doonaa 4-ta arin ee Fudud ee bur-burin karta noloshaada qoys iyo guurkaaga.
1.In Aad Caruurtaada Ka Doorbido Lamaanahaaga:
Waa Khalad ay ku dhacaan Ragg iyo Dumar badan taas oo ah in Ninka ama Gabadha Midkood caruurta ka doorbido Lamaanohooda, Tusaale ahaan in ay Gabadhu iska ilowdo Ninkeeda muhiimadana siiso caruurta sidoo kale in uu Ninku Iska iloobo xaaskiisa muhiimadana siiyo ilamaha yar ee uu dhalay taasna waxa ay saamayn weyn ku yeelataa Nolosha labada qof ee is qaba iyo waliba guud ahaan qoyska waxana ay ugu dambayn keenaysaa in uu qoysku bur-buro.
2.In La Iska Indha-tiro Masuuliyadaha:
Waxa waajib ku ah labada Lamaane in uu mid walba musuuliyada saaran si buuxda uga soo boxo mar walbana ka fikiro in uu farxad galiyo midka kale, marka ay labada lamaane midkood iska indha-tiro masuuliyada ka saaran midka kale ama gurigiisa sida ubadkiisa iyo wixii la mid ah waxa imanaya khilaaf iyo wal-wal kaas oo sabab u noqon kara bur-burka qoyska.
Wada-xidhiidhka ayaa ah Aas-Aaska guurka ama nolosha guur ee mudada dheer joogta sidaas darteed waxa fiican in ay labada qof ee is qaba si fiican iskula xidhiidhaan waliba isku fahmaan mid walbana dhankiisa qabto qoyska si ay isku fahmaan.
4.Diidista Raali Galinta:
Raali Galinta & Cafinta ayaa ah laba arin oo muhiim u ah Nolosha Lamaanaha ama mid walba oo ka mid ah qoyskaaga sidaas darteed waa in ay labada lamaane awood u lahaan karaan in ay is cafiyaan waliba is raali galiyaan marka uu khalad ka dhex dhoco mid walba ha sameeyo khaladkaase.
Mahadsanid sxb hore usoco